Iibhinki-Ngaselwandle 1 ibhedi ekumgangatho wokuqala - I-Airbnb
Iibhinki-Ngaselwandle 1 ibhedi ekumgangatho wokuqala
Le ndawo ingaphambili yolwandle yeVictorian yindawo enemigangatho emi-3, enevenkile engaphambili (ngoku yikhefi ethandekayo), kunye nokuhlala kwiiyunithi ezi-4 kwimigangatho emithathu. Ngokuthe ngqo ngaphaya kwendlela kukho iiGadi ezintle zePier, iimayile ezine zepromenade kunye nolwandle olubanzi lomlomo weHumber Estuary. Ime kumbindi weevenkile ezithandekayo, imivalo kunye neendawo zokutyela zeHigh St kunye neSeaview St, nazo zonke iCleethorpes kufuneka zibonelele kumgama wokuhamba ngokulula.
Eli ligumbi elinye lokulala elikumgangatho wokuqala-lisemva kwesakhiwo ke ngoko alinambono yolwandle kodwa endaweni yoko lixhamla emva kwemini nasekuseni kwelanga ngenxa yembonakalo yalo esemazantsi. Kutshanje ihlaziywe kwaye yaphuculwa, yindawo eqaqambileyo kwaye inomoya - ukusuka emnyango kukho ipaseji emfutshane enegumbi lokuhlambela kunye negumbi lokulala elingaphandle, elivula kwiplani evulekileyo yegumbi lokuhlala kunye nekhitshi.
Igumbi lokuhlala linebhedi yesofa-ehlala ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezimbini ezongezelelweyo ngokulungiselela kwangaphambili, kunye ne-Smart TV-i-WiFi ibandakanyiwe ukuze ungene kwiiakhawunti zakho zokuzonwabisa okanye uphose kuyo usebenzisa i-smartphone okanye ilaptop yakho. Kukwakho nechweba le-intanethi elinocingo oluqinileyo, ukuba ufuna ukuqhagamshelwa.
Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ngayo yonke into ekufuneka uyidinga, kubandakanya iwasha / isomisi. Kukho i-oveni kunye nesitovu sombane, ifriji edityanisiweyo enendawo yesikhenkcisi, i-microwave, itoaster kunye neketile-zinikezelwe ngeti kunye nekofu, khawundazise ukuba unokulukhetha na ubisi kunye neebhiskithi!
Igumbi lokulala linebhedi ephindwe kabini, isifuba sedrowa kunye nesibuko esinempahla ejingayo. Isixhobo sokomisa iinwele sikhona, kunye nebhodi yentsimbi kunye ne-ayina - yibhodi elingana netafile, undazise ukuba ufuna isayizi epheleleyo ukuba ukuthathela phezulu uku-ayina kwakho!
Nokuba ukuhlala kwakho eCleethorpes kungomsebenzi okanye uyolo, kule ndawo unokwenza okuninzi kuyo yonke indawo. Ndonwabile ukwabelana ngezimvo zam malunga neendawo zokutyela, zokusela kunye nokonwaba (zininzi kakhulu iinketho ezinkulu mva nje!) njengokuba bendisenza! Ndingafumaneka elwandle, elunxwemeni okanye kwindawo yokuhamba-hamba- kwaye ukuba uthanda ngaphandle ungabuxabisa ubuhle kunye nokwahluka kolwandle lwethu olukhulu kunye nonxweme lwangaphambili, yindawo ekhethekileyo kakhulu.
So I own a coffee shop too, but I’m mainly a tea drinker.
Find me at Maranta
15 Highgate DN35 8NR
It’d be ace to see you!
Ndikhetha kangangoko ukudibana neendwendwe ngokwam ukuze ndingene, kwaye ngexesha lokuhlala kwakho ndihlala ndifowuna kuphela kude. Ndihlala kwaye ndisebenza kufutshane kwaye ke ngoko ndiyafumaneka kuwe ixesha elininzi ngokufowunela okanye ngetekisi kwaye kulula kum ukuba ndiye emntwini- ukuba ndingakwenzela nantoni na ngexesha lokuhlala kwakho, nceda uqhagamshelane!
Ndikhetha kangangoko ukudibana neendwendwe ngokwam ukuze ndingene, kwaye ngexesha lokuhlala kwakho ndihlala ndifowuna kuphela kude. Ndihlala kwaye ndisebenza kufutshane kwaye ke ng…